बोलीदिए पुग्छ भन्छौ बातको के भर भो र ?
समाएर छाडी हिड्ने हातको के भर भो र ?
निर्मोहीलाई माया पनि जहर भयो अरे
इच्छाएको तिरस्कारमा मातको के भर भो र ?
टुक्रा पारी मनको पनि लिलाम हुने भयो
बेहोसी छु निसामन्न रातको के भर भो र ?
दुख पछि सुख आउछ भन्छौ तर पनि
कसरी गरु विस्वास घातको के भर भो र ?
नबराज बुढा 'Nabin udasi' September 14, 2011 at 5:06 PM
बेाली दिए पुग्छ भन्थ्यैा बाट क भेा र !
Aayush September 16, 2011 at 4:13 PM
धन्यवाद नवराज जी मिठो कमेन्टको लागी.. साहित्य बाटिकामा आउँदै गर्नुस है ..। अनि आफ्नो रचना पनि पठाउदै गर्नुस् है ।
नबराज बुढा 'Nabin udasi' September 16, 2011 at 9:00 PM
पक्कै पनी aayush जी, मैले हजुरकेा ब्लग सधै भिजित गरिरहन्छु..
बिभिन्न लेख रचना पढ्न पाउँदा असाध्यै खुसी लाग्ने गर्छ।
Aayush September 18, 2011 at 10:38 AM
धन्यवाद नवराज जी...